ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ သက်တော်(၆၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တော် နှင့် အထ္ထုပ္ပတ္တိ.... - kokochitchit.xyz
ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ သက်တော်(၆၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တော် နှင့် အထ္ထုပ္ပတ္တိ….
January 30, 2021 ko ko knowledge 0
ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ သက်တော်(၆၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါသည်..
သာသနာ့ဝန်ကို ခန္ဓာ့ဝန်ကို လွယ်ကူစွာ ရွက်ဆောင်နိူင်ပါစေ ဘုရား…
၁၉၅၈-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၂၈)ရက် အင်္ဂါနေ့ ၁၃၁၉-ခုနှစ်တပို့တွဲလဆန်း(၉)ရက်နေ့၌
ခမည်းတော်ဦးအောင်သန်း+မယ်တော်ဒေါ်စိန်ကြည်တို့က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ သောတာပန်ရပ်ကွက်တွင် ဓမ္ဓဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ လောင်းလျာကို မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်သည်..
အရှင်ဆေကိန္ဒသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟူ၍လည်း သိရှိကြ၏။
၁၉၇၅ ၌ စစ်ကိုင်းမြို့ အမှတ်(၁) အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၀ တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ၌ မန္တလေးမြို့ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၏ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ (A.G.T.I. (civil)) ကို ရရှိအောင်မြင်သည်။
၁၉၈၃၌ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် တောင်စွန်းဓမ္မဒူတတောရ ဆရာတော်ကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရှင်ရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူခဲ့သည်။
တောင်စွန်း ဓမ္မဒူတတောရကျောင်းတိုက်တွင် ပရိယတ္တိစာပေများကို လေ့လာ၍ မူလတန်း၊ ပထမငယ်တန်း၊ ပထမလတ်တန်း၊ ပထမကြီးတန်းတို့ကို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၃ တွင် စာချတန်း၌ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းစလုံးကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့်ပင် အောင်မြင်ခဲ့၍ အစိုးရသာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိတော်မူခဲ့သည်။ သဒ္ဓမ္မနေပုညဓမ္မာစရိယဘွဲ့နှင့် သာသနဇောတိပါလဓမ္မာစရိယဘွဲ့တို့ကိုလည်း ရရှိခဲ့၏။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူး၍ ထိုတက္ကသိုလ်မှ M.A. (Buddhism) နှင့် Ph.D. ဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့၏။
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒသည် ဓမ္မဒူတ နာယက အဖွဲ့ဝင်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့ဝင်၊ ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာန နာယကဆရာတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပဋိပတ္တိမဟာဌာန (ဝိပဿနာ) ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက် ပါမောက္ခ၊ အဆောင်မှူးဆရာတော် စသော တာဝန်တို့နှင့် ကျမ်းစာရေးသားခြင်း၊ စာပေပို့ချခြင်း၊ တရားဟောပြောခြင်း၊ တရားပြသခြင်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ လူငယ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဘွဲ့ကြီး ၃ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ သမိုင်းတလျောက်အသက် အငယ်ဆုံး စာပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖစ်တဲ့ ၁၅ နှစ်သားလေး”မောင်ဟန်ထွန်းအောင်”
ဘုရားထီးတော်တင်ဖို့အတွက် အလှူငွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်